'संविधान संशोधनका लागि वामगठबन्धन तयार' | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
‘संविधान संशोधनका लागि वामगठबन्धन तयार’
काठमाण्डौं, १३ माघ । संविधान बनेदेखि नै अधिकारहरु खोसिएका छन् एक पक्षले भनेको छ भने अर्काे पक्षले खोसेको अधिकार यदि छन् भने संविधान संशोधन गरेरै भएपनि दिन्छौं भनेका छन् ।
यदि मनन गर्दै जादा आम जनताको बुझाईमा कसैका अधिकार न कसैले खोसेको छ न कसैका अधिकार कसैलाई दिइएको छ । यी प्राकृतिक नियमहरु हुन् चलिरहेकै छन् । त्यत्ति मात्र हो आफ्नो बगैंचामा फलेको फल नखाएर अर्काको बगैंचा चहारिरहेको जस्तो मात्र देखिन्छ ।
पार्टी एकीकरणको लक्ष्यसहित वामपन्थी गठबन्धन बनाएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुखले संविधान संशोधनको निम्ति आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
दुबै दलका अध्यक्षले फरक–फरक ठाउँमा दिएको अभिव्यक्तिमा संविधान संशोधनको विषयले एकसाथ स्थान पाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको निम्ति तराई केन्द्रीत दललाई छलफलको निम्ति आह्वान समेत गरे ।
तराई केन्द्रीत दलका नजरमा ‘अलोकप्रिय’ मानिने उनले आफू कहिल्यै संशोधनको विपक्षमा नरहेको तर पहाडबाट अलग राखेर तराईलाई एक प्रदेश बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेको बताए ।
संविधानमा कुनै विभेद भएमा त्यो सच्याउन तयार रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘मधेशका जनता नेपाली होइनन् ? उनीहरुलाई समृद्ध, सुखी र अधिकार सम्पन्न बनाउने हाम्रो कर्तव्य होइन ? त्यहाँको विकाश हाम्रो अभिभारा होइन ? कुनै विभेद छ भने आउनुस् छलफल गरौं, तत्काल सच्याइन्छ ।’
पोखरामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले अध्यक्ष ओलीले तराईमा पकड रहेका दलले उठाउने गरेको संशोधनको मागबारे मुख खोल्ने अवसरको रुपमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई उपयोग गरेका हुन् ।
तर हालै तराई केन्द्रीत दलका नेतालाई पनि आफूले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव राखेको सुनाउँदै उनले भने, ‘देश र जनताको पक्षमा संशोधन गर्न त हामी तयार छौं, आउनुस् छलफल गरौं भने पछि उहाँहरु संशोधन हुन्छ कि भनेर डराएर फेरि कांग्रेससँग पुग्नु भयो । उहाँहरु हामीसँग मिल्ने बित्तिकै संशोधन हुन्छ, दुई तिहाई पुग्छ नि ।’
ओलीसँग पार्टी एकता गर्ने प्रयासमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संशोधनको प्रसंग उप्काएका छन् ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रमा उनले मधेशी, आदिवासी जनजाती लगायतको अधिकार र सम्मान संविधानमा पूर्ण सुरक्षित हुन नसकेको बताउँदै भने, ‘संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट बाँकी अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’
उनले पनि ओलीको भनाइसँग मिल्दो गरी भावी सरकारले प्रदेश नम्बर २ को विकासमा बढी ध्यान दिने प्रतिवद्धता दर्शाए ।
सत्तारोहणको प्रतिक्षामा रहेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुखको ताजा अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
कतिपयले नयाँ सरकार गठनको पर्खाइमा रहेका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डका ताजा अभिव्यक्तिलाई तराई केन्द्रीत दलसँग सहकार्य र सन्तुलनको प्रयासको रुपमा हेरेका छन् ।
जे–जति भाषणभिषण गरेपनि आखिर संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्छ । जसभित्र समग्र नेपालीहरुको भावना अटाउन्, सबैलाई सुविधा होस्, कसैलाई तल कसैलाई माथि ग¥यो भने भोलीको दिन नेपाल असफल राष्ट्र घोषित हुनेछ । वर्तमानका नेताहरु भोलीका दिनमा स्वयं आत्महत्या नगर्लान् भन्न सकिदैन ।
← कर्जा प्रवाहको नियम उल्लंघन गरे कारबाही गरिने
देउवा सरकारको घोषणा, कार्यान्वयन असम्भव →